Maamulka Caafimaadka - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Maaraynta Caafimaadka
Barnaamijyadeenna maaraynta caafimaadka ayaa lagu dhisay adiga. Waxaan kula shaqeyneynaa si aan u aqoonsanno una buuxino yoolalkaaga caafimaad.
Barnaamijyada kaa caawinaya inaad la kulanto yoolalkaaga caafimaad
Community Health Plan ee Washington (CHPW) waxay kulashaqaynaysaa si aad uhesho yoolalkaaga caafimaad ee shaqsiyeed. Habkayagu wuxuu adeegsadaa tilmaamaha caafimaadka iyo caddaynta ku saleysan, taas oo macnaheedu yahay in la tijaabiyey oo la muujiyey inay waxtar leeyihiin.
Mararka qaarkood, baahiyahaaga caafimaad ayaa sida ugu wanaagsan wax looga qabtaa ilaha bulshada sida helitaanka cuntada ama hoyga. CHPW waxay leedahay khuburo goboleed oo ku baahsan gobolka oo dhan kuwaas oo kugu hagi kara ilaha kuugu dhow.
Maareynta caafimaadka ee CHPW ma ahan bedelida xiriirka ka dhexeeya adiga iyo daryeelayaashaaga. Taabadalkeed, waxaan taageernaa wada xiriirka adiga iyo dhakhaatiirta, iyo waliba iskuxidhka udhaxeeya bixiyeyaasha, si aad uhesho daryeelka aad ubaahantahay.
Waa kuwee barnaamijka maareynta caafimaadka ee CHPW aniga igu habboon?
Waxaan haynaa barnaamijyo badan oo kala duwan si aan uga caawinno xubnaheenna maareynta caafimaadkooda. Haddii aadan hubin midka ugu wanaagsan ee baahidaada daboolaya, la xiriir adeegga macaamiisha. Waan ku farxi doonaa inaan ku caawino.
Maareynta kiisaska CHPW waxay wax ka qabataa baahiyahaaga daryeel caafimaad ee shakhsi ahaaneed, laga bilaabo sugnaanta cuntada ilaa laga caawiyo inaad gasho si aad ula kulanto dhakhtarkaaga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maareynta Kiiska
Barnaamijkeena maaraynta kiisaska 3-waji ah, waxaan kugula soconaynaa adiga oo howsha socda oo aan si taxaddar leh ula soconnaa caafimaadkaaga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maareynta Kiiska Bariatric
Tababbarka caafimaadka ayaa loo heli karaa xubnaha laga helay cudurka neefta, COPD, wadnaha oo istaaga, ama sonkorow. Haddii aad leedahay mid ka mid ah xaaladahan, tababarka caafimaadka ayaa kaa caawin kara inaad maamusho astaamahaaga.
Waxbadan ka baro Barnaamijka Tababarka Caafimaadka
Waxaan u isticmaalnaa sahankan kooban ee ku saabsan caafimaadkaaga iyo qaab nololeedkaaga si aan u aqoonsanno aagagga muhiimka u ah hagaajinta iyo soo jeedinta siyaabaha loo maareeyo xaaladaha caafimaad ee socda.
Waxbadan ka baro Qiimaynta Caafimaadka
Barnaamijka Dib u Eegista Bukaanka iyo Isuduwaha wuxuu si toos ah u daryeelayaa daryeelkaaga si uu si fiican ugu adeego caafimaadkaaga iyo amnigaaga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijka Dib-u-eegista iyo Isku-dubbaridka Bukaanka (PRC)
Maamulka Daaweynta Daaweynta
Xubnaha qaata daawooyin badan, si loo hubiyo inay wanaajinayaan caafimaadkaaga.
Waxbadan ka baro Barnaamijka Maareynta Daaweynta Daaweynta
Haddii dhibaato kaa haysato buuxinta baahiyaha aasaasiga ah, kooxdayada Barnaamijyada Beesha ayaa ku caawin kara. Waxay kugu xiri karaan ilaha deegaanka ee cuntada, guryaha, tababarka shaqada, iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxbadan ka baro barnaamijyada bulshada
CHPW waxay ku siisaa adeegyo guri caafimaad Washington oo dhan xubnaha loogu talagalay xubnaha leh xaalado adag oo baahiyahooda daryeel ay sarreeyaan.
Waxbadan ka baro Barnaamijka Guriga Caafimaadka
Barnaamijka Dakhliga ee Amniga Dheeraadka ah
Haddii da'daada ama naafonimadu kaa joojiso inaad lacag hesho, barnaamijkan ayaa kaa caawin kara.
Waxbadan ka baro Barnaamijka SSI
Talaalku wuxuu ilaaliyaa qoyskaaga iyo bulshadaada mid amaan ah. Tallaalada waxaa loo daboolay xubnaha CHPW.
Waxbadan baro oo arag jadwalka tallaalka
Baadhitaanka Heerka Sunta Lead
Baadhitaanka heerka leedhka dhiiga ayaa laga daboolayaa carruurta jirta hal iyo laba sano (12 iyo 24 bilood).
Waxbadan ka baro baaritaanka heerka leedhka dhiigga
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 12, 2021